Taratra momba ny fifandraisana amin'ny lehilahy, amin'ny fiainana manokana sy ny fitondrana vohoka
Taratasy ho an'ny hoavy tsy ho ela
Ny fampisehoana tarot by tarot dia malaza satria noho ny fanampian'izy ireo dia afaka mahazo fampahalalana manan-danja sy mahaliana. Misy fomba maro ampiasain'izy ireo hahatakatra ny toe-javatra samihafa, ohatra, amin'ny asa na amin'ny fiainana manokana.
Taratasy ho an'ny mpandidy miaraka amin'ny dikanteny
Mba hilazana ny fahamendrehana fa marina, ilaina ny mijery fitsipika manan-danja maro:
Ny fonja, izay ampiasaina amin'ny layout, dia tsy azo omena ny olon-kafa.
Azonao atao ny maminavina aorian'ny fianarana ireo sarintany mba hahatakarana azy ireo ary handika azy ireo araka ny tokony ho izy, miankina amin'ny toe-javatra. Ny sanda amin'ny karatra tsirairay dia azo jerena eto .
Ny karatra taratra ho an'ny mpandrindra dia tsy maintsy atao raha tsy amin'ny finoana ny valin'ny marina. Raha mitandrina amim-pahamendrehana ny departemanta ianao, fa manantena ny hahazo fampahafantarana azo antoka dia tsy mendrika izany.
Raha tsy afa-po ny valiny dia tsy mila averina averina. Ny sarintany vaovao Tarot dia mendrika hanaovana farafaharatsiny roa herinandro.
Taratra ho an'ny ho avy
Ny hoavy dia liana foana ny olona, ​​noho izany dia malaza be ny lokony. Ny karatra ho an'ny hoavy tsy ho ela dia hanome fahafahana hianatra ny filazana marina momba ny sehatra samihafa eo amin'ny fiainana. Amboary ny tapa-kazo ary manaova drafitra, araka ny aseho amin'ny sary. Ny dikan'ny sarintany dia:
S - dikanteny. Izy dia maneho olona mpanan-karena.
1 - Manome endrika toetra manokana.
Andininy faha-2 - toe-javatra mifandraika amin'ny lafiny ara-materialy.
# 3 - fampahalalana momba ny tontolo manodidina.
№4 - milaza sarintany momba ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana.
Andininy faha-5 - dia mamaritra ny habetsan'ny fialamboly sy ny fahafinaretana.
№6 - fampahalalana momba ny olana mety hitranga amin'ny fahasalamana.
7 - inona no andrasan'ny fahavalo?
8 - inona ny fiovana maneran-tany?
№9 - lalana azo atao.
№10 - olana mifandraika amin'ny asa na orinasa.
№11 - inona no andrasana amin'ny fifandraisana amin'ny namana sy ny mpiara-miasa.
№12 - olana mety amin'ny hoavy.
No. 13 - na misy fiantraikany amin'ny lasa amin'izao fotoana izao.
# 14 - ny fiantraikany amin'ny ankehitriny amin'ny ankehitriny.
15 - toe-javatra izay tsy azo sakanana.
Ny 16 - ny vokatra, izay azo raisina amin'ny vokatry ny fampandrosoana ny toe-draharaha.
Tarotasy ho an'ny fitiavana
Ankizivavy maro manirery no mihevitra sy miahiahy foana rehefa hiova ny toe-javatra eo amin'ny fiainany manokana. Mba hahazoana valim-panontaniana dia azonao atao ny manonona hevitra tsotra. Atsipazo ny kitapo ary manaova layout, mifantoka amin'ilay sary. Ny dikan'ny karatra Tarot amin'ny seho am-pitiavana dia ireto manaraka ireto:
No. 1 - rehefa hisy fivoriana miaraka amin'ny tapany faharoa.
# 2 - hisy ny fiarovana amin'ny fifandraisana vaovao.
№3 - na manantena fampakaram-bady.
No. 4 - na ny fifandraisana vaovao dia hitovy amin'ny fifandraisana teo aloha.
Tsia - raha misy adidy ara-bola ao amin'ny mpivady.
6 - Ho ela velona, ​​ny fihetseham-po tsotsotra dia hitoetra ao anatin'ny fifandraisana.
No 7 - inona no tokony hataonao mba hitazonana ny fifandraisana amin'ny fotoana maharitra.
Ny fifandraisan'i Tarot amin'ny lehilahy iray
Ny fifandraisana amin'ny lahy sy ny vavy dia manahy mikasika ny fahamendrehan'ny mpiara-miasa sy ny olana hafa. Mba hahatakaranao ny zava-misy dia azonao atao ny mamolavola Tarot ny fiainanao manokana. Ilaina ny maka ny tabilao eo am-pelatanana ary mandritra ny fotoana fohy handinihana ny fifandraisana misy eo. Ny fampisehoana taratra toy izany dia natao amin'ny alàlan'ny lasso tranainy . Vikao izy ireo ary apetaho eo anoloanao karatra telo ihany:
Ny sarintany voalohany dia hampiseho ireo zava-nitranga tamin'ny lasa izay misy fiantraikany amin'ny zava-mitranga amin'ny tena fiainana.
Ao amin'ny sari-tany faharoa dia afaka mianatra momba ny toetry ny toe-javatra amin'izao fotoana izao ianao.
Ny karatra farany dia hitsara izay hitranga tsy ho ela.
Tarotasy ho an'ny fanambadiana
Ny fanaovana sikidy dia mety ho an'ny ankizivavy izay manana fifandraisana matotra ary mieritreritra ny dingana manaraka, izany hoe amin'ny diabe mankany amin'ny satroboninahitra. Ny fampisehoana Tarot tsotra ho an'ny mpandray anjara dia tsy mila fahalalana sy fampiharana manokana. Tsy maintsy arahina araka ny sary ny karatra. Ny dikantenin'ny sikidy dia izao manaraka izao:
# 1 - manome valiny amin'ny fanontaniana, izay manahy raha ilaina ny mampifandray anao amin'ny fifandraisana matotra.
No2 - dia hilaza, na misy faniriana sy finiavana amin'ilay bandy ho an'ny fampakaram-bady.
# 3 - hanome fampahalalana momba ny fifandraisan'ny fifandraisana.
№4 - dia hanampy amin'ny fahatakarana, na ilaina ny manantena ny tolotra tanana sy fo .
№5 - dia hilaza ny tena fampakaram-bady.
No 6 - manome ny endriky ny fifandraisana.
№7 - mampahafantatra momba ny ho avy.
Maro ireo faminaniana izay manampy amin'ny fahafantarana ny tena fihetseham-pon'ilay mpivady. Ny fanazavana fanampiny dia manome ny sarin'ny Tarot amin'ny hevitry ny lehilahy iray atao hoe Venus ao Scorpio. Voalohany aloha, fanazavana maro, noho izany dia heverina ho ny planeta lehibe i Venus mba handinihana ny fifandraisana, ary Scorpio dia iray amin'ireo famantarana mistery indrindra momba ny zodiaka, izay mifandray amin'ny fihetseham-po mahery vaika sy ny firehetam-po.
Ny fanaovana sikidy amin'ny alalan'ny tarot amin'ny toetran'ny olona dia hanampy amin'ny fahatakarana ny fahatsapana fihetseham-po ary maneho ny fiantraikan'ny miafina amin'ny fifandraisana. Amin'ny alalan'izany fanampiana izany dia afaka mianatra momba ny fivoaran'ny hetsika ianao ary mahazo torohevitra mahasoa. Ny famaritana ny drafitra dia manan-kery mandritra ny telo volana. Atsipazo ny tabilao, apetraho toy ny eo amin'ny sary, ary mandroso hoe:
1 - Fifandraisana amin'ny olona malala amin'izao fotoana izao.
2 - ny fahatsapan'ny mpamokatra;
No. 3 - fahatsapana izay manana lehilahy sambatra ho an'ny mpiara-miasa.
No 4 - tena fahatsapana ho an'ilay voafidy.
5 - izay tsapan'ny hay.
No 6 - fitarihana miafina amin'ny fihetsiky ny lehilahy iray sambatra.
Laharana 7 - inona no vokatra aterak'ilay tia?
# 8 - zava-nitranga manan-danja eo amin'ny fifandraisana izay hitranga tsy ho ela.
9 - torohevitra momba ny fifandraisana.
Tsia 10 - inona ny fifandraisana amin'ny hoavy.
Ny Tarotasy ho an'ny Bevohoka
Ireo vehivavy te-ho tonga reny, ankoatra ny fitsapam-pahaizana mahazatra, dia afaka mampiasa fampisehoana tarot mba hanampiana azy ireo hahafantatra raha nisy ny fiheverana, na hisy fahasarotana amin'ny fitondrana ankizy, inona no karazana asa tokony hatao, sy ny sisa. Voalohany dia mila mifidy ny karatra lehibe - S. Tapa-kevitra izy mianakavy izay mihevitra, izany hoe ity vehivavy ity ary raha manana volom-behivavy izy, dia tokony ho kaopy na pentacles izany, ary raha maizina - manda sy sabatra. Mba hahazoana harena milaza ny fahamendrehana, mila manao layout ianao, araka ny aseho amin'ny sary.
# 1 - dia mamaritra ny toetry ny fahasalaman'ny vehivavy.
No2 - ny valin'ny fanontaniana mikasika ny, na nisy ny fisainana na tsia. Marika mampiseho fa misy ny fitondrana vohoka: Jester, Ace of Coins, Ace ny Cups, Empress, Masoandro, Cup Ten ary Valala.
No3 - dia hiteny momba ny olana mety hitranga amin'ny fiterahana na ny fiandohan'ny fitondrana vohoka, ohatra, na mety hampidi-doza ny fialantsiny sy ny hafa.
No. 4 - mamaritra ny fahasalaman'ny zaza mandritra ny fitondrana.
№5 - manampy hahatakatra ny fihetseham-pon'ny reny mandritra ny vanim-potoan'ny fitondrana.
# 6 - dia mamaritra ny antsipirian'ny endriky ny tenany.
№7 - miresaka momba ny fahasalaman'ny zaza, izay ho teraka.
Tarot ny fahasalamana
Ny fahasamihafana isan-karazany dia ampiasaina mba hahatakarana raha misy olana ara-pahasalamana, inona no nahatonga azy ireo, inona no hatao mba hiatrehana aretina sy ny sisa. Raiso ny kitapo, tazony eo an-tananao ary aforeto izany. Tarot Ny fahasalamana dia vita araka ny endrika naseho.
№1 - toe-pahasalamana ho an'ny androany.
# 2 - famaritana ny olana, raha misy izany.
# 3 - izay mety hiteraka aretina.
No. 4 - Amin'ny rafitra inona no ilaina iantsoana.
№5 - fampahalalana miafina momba ilay aretina.
№6 - izay mitazona ny fahasalamana amin'izao fotoana izao.
Andriamatoa 7 - izay ilaina amin'ny fandinihana manokana.
Ireo andininy faha-8 sy faha-9 izay hanampy amin'ny fampiofanana ny toe-pahasalamana.
№10 - izay hanampy amin'ny fanasitranana.
Tarotasy ho an'ny fandraharahana
Ny fanambarana nomena dia hanampy amin'ny fampahalalana momba ny toe-draharaha ankehitriny, ny tanjona, ny mety ho vinavinan'asa sy ny sisa. Ny fanaovana sikidy, izay tsy mora takona ny layout, dia hanome toro-hevitra na hilaza ny mety ho vokatr'ilay raharaha voavolavola. Afangaro ny kitapo ary manamboara lay.
# 1 - famaritana ny raharaha ankehitriny.
Tsia 2 - inona no tokony hofidiana, ary inona no tanjona napetraka.
# 3 - zava-misy tsy azo ovàna.
4 - zavatra izay mety hisy fiantraikany.
Tsia 5 - torohevitra mahasoa na famintinana.
Tarotasy ho an'ny asa
Ny fanaovana sikidy dia manampy amin'ny fahatakarana ny toe-javatra ankehitriny eo amin'ny asa. Ny fampisehoana ho an'ny asa dia tsy maneho fotsiny ny ankehitriny. Rehefa tapihina ny karatra ary mametraka azy ireo, toy ny ao amin'ny sary, afaka miditra amin'ny fandikana.
Tsia 1 - mamariparitra ny zavatra omen'ilay mpandainga ny asany.
# 2 - dia hilaza, na ilaina ny manohy ny tra-boina.
3 - misy loza miafina.
No4 - dia manondro ny antony manosika.
Tsia 5 - ny fiverenana avy any am-piasana amin'ny asa natao, izay nomena laharana karatra 1.
№6 - fiantraikan'ny mpiasa amin'ny asa.
Tarotasy ho an'ny vola
Ny fanontaniana ara-bola dia manan-danja ho an'ny olona maro ary hahatakatra ny toe-javatra. Ny sarin'ny Tarot dia manome vaovao momba ny ho avy ho an'ny fahasalamana ary manampy anao hianatra momba ny antony mahatonga ny olana ara-nofo. Ny faharetan'ny hetsika dia telo volana farafahakeliny. Tarot dia malaza amin'ny vola "Coucher feno". Amboary ny kitapo ary karakarao efatra ihany, ka asehoy azy ireo amin'ny sary.
# 1 - misy eo amin'ny vato misakana ankehitriny amin'ny làlana mankany amin'ny fandrosoana ara-bola.
No2 - dia hilaza aminao izay tokony hikarakaranao ny fanovana ny toe-javatra ho tsara kokoa.
# 3 - dia hamaritra izay tsy mamela azy hivoatra sy handroso ary inona no tsy hita eo amin'ny fiainana.
# 4 - dia hanondro ny hetsika manokana tokony horaisina hanatsarana ny toe-bola.
Sarin'ady momba ny toe-draharaha
Ny heverina ho matanjaka indrindra dia heverina ho sarivongana zioga , izay manampy amin'ny fahazoana fampahalalana manan-danja. Ho famaliana fanontaniana iray momba ny toe-javatra rehetra, dia afaka mampiasa ny lazan'ny "Golden Horseshoe" ny harena. Ny fizarana tarika Gypsy dia manampy amin'ny fianarana momba ny hoavy sy ny fomba hifaranan'ny toe-javatra. Apetraho eo anoloanao ny kitapo iray ary mametraha fanontaniana iray. Taorian'izany dia natao "Taratasy telo ho an'ny toe-javatra" i Tarot, izay ahafahanao mahazo toerana telo tsy mahazatra.
Ny karatra voalohany dia mampiseho ny lasa, izay misy fiantraikany amin'ny toe-javatra amin'izao fotoana izao.
Noho ny sarintany faharoa dia azonao fantarina ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao.
Ny sarintany sisa no haneho ny fomba hivoahan'ny hoavy tsy ho ela.
Rune ny Harena
Ijing: ny fandikana ny hexagrams
Ny sikidy marina indrindra amin'ny Tarot amin'ny hoavy
Old Slavic runes
Fivarotana amin'ny Krismasy amin'ny faniriana pilina
Divination amin'ny daty nahaterahana
Mandeha amin'ny fandresena ny loteria
Ny famantarana ny Zodiac dia Leo - toetra sy mifanaraka amin'ny famantarana hafa
Karpona ao anaty oven - recipe
Famantarana ny famelan-keloka alahady
Ahoana no anampian'ny arikanjely Gabriel?
Manicure amin'ny vato rongony
Varavarana fidirana misy fitaratra
Autumn Makeover 2013
Ahoana no ahafahanao miaina ny famadihana ny havanao?
Akanjo amina sehatra chiffon
Rinoflumucil ho an'ny genyantema
Ahoana no hanaisotra ny fitiavana?
Kalorie vinaingitra akoho boaloboka
Amin'ny inona ny manao akanjo masoandro?